ओलम्पस पेन E-PL9: 4K रेकर्डिंग सहित रेट्रो क्यामेरा | ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | फोटोग्राफी, छवि र ध्वनी
ओलम्पसले आफ्नो नयाँ पेन E-PL9 क्यामेरा शुरू गर्ने घोषणा गर्‍यो। यो अन्तिम मोडल हो जुन पेन लाइट दायरासँग सम्बन्धित छ र हामी दुई बर्ष पहिले लन्च गरिएको E-PL8 को अपडेट संस्करणको सामना गरिरहेका छौं। यस नयाँ मोडलले दुई बर्ष अघि सुरू भएको क्यामेराको केहि पक्ष सुधार गर्न खोजेको छ। यसको लागी, हालको बजार मागहरु लाई अपडेट गरीन्छ.
डिजाइनको सर्तमा, यस ओलम्पस पेन E-PL9 अघिल्लो मोडेलको रेट्रो शैली कायम गर्दछ। जहाँ जहाँ वास्तवमै परिवर्तनहरू हुन्छन् जहाँ यसको विशिष्टताहरू छन्। यो हामीलाई अघिल्लो मोडेल भन्दा धेरै प्रदान गर्दछ। ती मध्ये K के रेकर्डि।.
यदि हामी तपाईंको विशिष्टताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं भने, यो नयाँ ओलम्पिस क्यामेरामा १ 16 मेगापिक्सलको सीएमओएस सेन्सर छ, जुन अघिल्लो मोडेल जस्तै छ। थप रूपमा, तीन-अक्ष स्थिरीकरण अझै पनि यस मोडेलमा अवस्थित छ। ओलम्पस अपडेट गरिएको छ अटोफोकस यस -१ विन्दु प्रणालीबाट १२१ पोइन्ट प्रणालीमा यस E-PL81 को साथ।
प्रयोगकर्ताहरू पनि सक्षम हुनेछन् छविहरू सीधा तपाईंको स्मार्टफोनको साथ ब्लुटुथ प्रयोग साझा गर्नुहोस्। योसँग वाइफाइ पनि छ, त्यसैले हामीसँग दुबै विकल्पहरू छन्। थप रूपमा, यो क्यामेरा ब्रान्डको माइक्रो फोर थर्ड्स लेन्सको दायरासँग मिल्दो छ।
यस क्यामेरा दायरा मा सस्तो हुने प्रतिज्ञा गर्दछ। तसर्थ, यो एक रूपमा देखिएको छ मोडेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरीएको छ जसले स्मार्टफोनको स्मार्टफोनलाई उनीहरूको फोटोहरूको लागि प्रयोग गर्दछ र क्यामेरा प्रयोग गर्न सुरू गर्न चाहन्छ साँच्चै। योसँग स्वचालित मोड पनि छ, एक स्क्रिन जसले सेल्फी लिन र अन्य कार्यहरू लिनको लागि घुमाउँदछ जुन यसको प्रयोग प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै सहज बनाउँदछ। पहिले नै उल्लेख गरिएको अतिरिक्त F० fps मा KK रेकर्डि।।
ओलम्पस पेन E-PL9 मार्केटमा तीन फरक र .्गमा हिट हुनेछ (सेतो, कालो र खैरो)। यसको प्रक्षेपण ठाउँ लिने अपेक्षा गरिएको छ युरोपमा मार्च। यद्यपि सहि मिति भने खुलेको छैन। यसको मूल्यको बारेमा, यो भनिने छ कि यो हुनेछ ०. 699 युरोको बारेमा। यो एक गौण सेटको साथ आउँदछ जुन १-14--42२ एमएम एफ .3.5.-5.6--XNUMX..XNUMX EZ पेनकेक लेन्स समावेश गर्दछ। यदि तपाई के चाहनुहुन्छ केवल क्यामेरा हो, तब यसको लागत 549 XNUMXeयुरो हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » छवि र ध्वनी » ओलम्पस पेन E-PL9: 4K रेकर्डिंगको साथ एक रेट्रो डिजाइन
के काठ इस्पात भन्दा बलियो हुन सक्छ?